Thermomix vs MyCook | Xeerarka ThermoRecipes
Robot noocee ah ayaa la iibsadaa? Thermomix ama MyCook? Waxaan falanqeyn doonaa oo isbarbardhigi doonaa astaamaha ugu muhiimsan ee labada nooc ee hadda jira ee labada aalado si ay kaaga caawiyaan go'aankan: Thermomix TM31 iyo MyCook.
Waxaan ku bilaabi doonnaa afarta kala duwanaansho iyo astaamo ee go'aamin kara xulashadeena: qiimaha, habka kuleylka iyo heerkulka, soo saaraha iyo qaabka wax iibsiga.
Thermomix ka fiican ama MyCook?
Sida aan arki karno, MyCook waa qiyaastii € 200 ka raqiisan TMX. Halkan waxaan ku muujineynaa qiimaha rasmiga ah, in kasta oo dabcan labada magacba ay sameyn doonaan dalabyadooda si ay u soo jiitaan iibsadeyaal badan. In kasta oo MyCook ay hoos u dhigi karto qiimaheeda waqtiyada qaarkood ee sanadka, Thermomix wuxuu siin karaa macaamiisha xulashooyinka sida maalgelinta dulsaarka-dulsaarka ah, buugaagta cuntada lagu kariyo, boorsooyinka gaadiidka ama 2 koob oo ah qiimaha mid.
Habka kuleylka iyo heerkulka
MyCook: Soo-saarista (40º - 120º)
Heerkulbeegga: Cadaadiska (37º - 100º)
Habka wax loo kariyo waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee ay ku kala duwan yihiin labada rooti. Waqtigan xaadirka ah, MyCook wuxuu ku guuleystey inuu dhaafo Thermomix maaddaama habka kuleylintu uu yahay indho-indheyn, hab casri ah oo dhakhso leh, oo leh heerkul u dhexeeya 40º ilaa 120º. Si kastaba ha noqotee, Thermomix wuxuu ku kulmaa iska caabin, hab dhaqameed iyo gaabis ah oo heerkulkiisu u dhexeeyo 37º iyo 100º. Sidaa darteed, waxaan dhihi karnaa MC wuxuu kululaa qiyaastii 2-4 daqiiqo oo ka dhakhso badan TMX, had iyo jeer waxay kuxirantahay xaddiga ay ka kooban tahay in la kululeeyo.
Falanqaynta isbedbeddelka heerkulka waxaan aragnaa in Thermomix uu gaaro 37º dhibic wanaagsan, heerkul aad u faa'iido badan oo lagu karbaaxo caddaanka iyo ukunta qulqulaya, iyo sidoo kale sameynta cajiinka. Si kastaba ha noqotee, MyCook wuxuu gaaraa 120º, heerkul qumman oo loogu talagalay walaaqyada, marka Thermomix uusan awood u lahayn inuu dhaafo 100º.
Foomka wax iibsiga
MyCook: iibsiga tooska ah ee dukaamada qalabka.
Heerkulbeegga: guriga iyada oo loo marayo soo bandhigayaasha rasmiga ah ee Thermomix.
Halkan waxaan ku aragnaa mid ka mid ah farqiga weyn ee u dhexeeya labada aalado. Si loo helo TMX waa inaan ku sameynaa iyada oo loo marayo wariyeyaasha imaan doona gurigeenna iyada oo aan wax ballanqaad ah la siinin, waxay na bari doonaan mashiinka si shaqsi ahaaneed qiyaastii 2 ama 3 saacadood waxaanan isla karineynaa dhowr suxuun, marka lagu daro weydiinta nooc kasta shaki ayaan ka haynaa robot. MyCook, dhanka kale, waxaa laga iibsan karaa dukaan kasta oo agab ah, sidaasna looga takhalusi karo baahida loo qabo qof walba inuu yimaado gurigaaga. Qodobka taban ee halkan ku yaal ayaa ah inaanan fursad u heli doonin inaan aragno sida uu u shaqeeyo MyCook.
MyCook: Taurus - Isbaanish.
Heerkulbeegga: Vorwerk - Jarmalka.
MyCook waxaa soo saarey shirkada caanka ah ee reer Catalan Taurus, oo 52 sano khibrad u leh abuurista iyo qaabeynta qalabka yar yar iyo kuwa waaweyn ee guriga. Thermomix waxaa soo saartay shirkadda Jarmalka ah ee Vorwerk, iyadoo 120 sano oo waayo-aragnimo ah soo saartay aasaas ahaan laba shey: Kobold vacuum nadiifiye iyo Thermomix aaladaha jikada. Halkan waxaan ku haynaa labo qodob oo aan ku qiimeyneyno: ama wax ka iibso shirkad Isbaanish ah, taas oo xilliyada dhibaatada ay tahay wax dadku qiimeeyaan si lacagtu u sii joogto dalkeenna, ama ay doortaan inay lacag ku maalgashadaan sumcadda wanaagsan ee tikniyoolajiyadda Jarmalka.
Aynu haddaba falanqeyno astaamaha kale ee xiisaha leh iyo kala duwanaanshaha u dhexeeya labada aalado:
MyCook: 11.000 kacaan daqiiqadii.
Heerkulbeegga: 10.200 kacaan daqiiqadii.
In kasta oo jaleecada hore aan aragno in MyCook uu ka sarreeyo Thermomix kacdoonnada, waxay umuuqataa in tani aysan metelaynin wax-u-dhimaal robotka Jarmalka ah. Maxaa go'aamin doona tayada shiidi waa qaabka muraayadda. Muraayadda MyCook way ka cidhiidhsan tahay salka oo way ka dheer tahay. Thermomix, oo lahaa nashqad isku mid ah qaabkeedii hore (TM21), waxay wax ka badashay qaabeynta qaabka imika iyadoo samaysay baaquli balaaran oo salka iyo hoose ah, iyadoo lagu gaarayo shiidiid waxtar badan oo hufan.
Heerkulbeegga: 15 sano.
Mycook wuxuu ku jiray suuqa sanado yar marka loo eego Thermomix, markaa ma haysano cunsurro nagu filan oo aan ku qiimeyn karno celceliska muddada Mycook. Si kastaba ha noqotee, waxaan ognahay in Thermomix uu yeelan karo a celceliska muddada ilaa 15 sano.
Heerkulbeegga: 6 kg (300 x 285 x 285 mm)
Waxaan aragnaa in Thermomix uu ka fududyahay kana yaryahay MyCook, waa muuqaal lagu xisaabtamayo jikooyinka yaryar.
Ma kharash badan baa ku baxa nadiifinta Thermomix-ka?
MyCook: Ka digtoonow marka aad dhaqaysid garbaha maadaama aysan biyaha dhexdooda ku liqi karin.
Heerkulbeegga: dhammaan qalabka waa saxan-dhaqe aamin ah oo lagu dhex-quusin karaa biyaha.
Markay tahay dhaqida, Thermomix si cad ayuu u guuleystaa. Laga bilaabo naqshadeynta daboolka, waxaan dhihi karnaa MyCook wuxuu leeyahay xoogaa darajooyin ah si loo fududeeyo soo dhaadhaca cuntada inta lagu jiro xawaare sare oo ka dhigaya nadiifinta xoogaa dhib badan tan iyo markii ay wax badan firidhsan tahay markii biyuhu si toos ah tubbada uga soo dhacaan. Sidoo kale, garbaha ma ahan kuwo nadiifiya weelka dhaqda. Astaamahani waxay ahaayeen qaabkii hore ee Thermomix model (TM21) waxaana loo rogay 2004 iyadoo qaabka cusub iyo kan hadda jira ee suuqa yaalla: garbaha waa la dhaqi karaa iyadoo aan wax dhibaato ah ku jirin mashiinka weelka lagu dhaqo daboolkuna gabi ahaanba waa siman yahay.
MyCook: aasaasiga ah.
Heerkulbeegga: ahmiyad gaar ahaaneed oo ka timid hoyga iyo helitaanka bilaashka koorsooyinka cunto karinta oo badan.
Iyada oo leh MyCook, adeegga iibka kadib wuxuu lamid yahay kan qalabka kale. Haddii ay jaban tahay ama aad u baahan tahay beddelaad, la xiriir iyaga oo aad xarunta u dhiganta. Si kastaba ha noqotee, Thermomix wuxuu u shaqeeyaa si aad u kala duwan. Xaqiiqda ah bixinta ku dhowaad 1.000 euro iyo iibsashada iyada oo loo marayo wariye, ayaa leh abaalmarinteeda. Soo-jeediyuhu wuxuu noqon doonaa xiriirkeena-iibka kadib gebi ahaanba shakhsi ahaan baahiyahayaga. Si kale haddii loo dhigo, haddii aan wax dhibaato ah ku qabno mashiinka ama wax shaki ah oo ku saabsan nooc kasta oo cunto karin ah, si dhakhso leh ayaan ula xiriiri karnaa iyada oo si shaqsi ah ayey noogu soo xaadiri doontaa, xitaa waxay imaan doontaa gurigeenna si ay u sameyso cuntada aan iska caabinno. Intaa waxaa sii dheer, waftiyada Thermomix waxay gebi ahaanba bilaabaan koorsooyin cunto karin ah oo bilaash ah oo ku saabsan mowduucyo aad u kala duwan oo loogu talagalay macaamiisha Thermomix iyo kuwa ay soo bandhigayaashu nagu marti qaadi karaan
Aynu ku aragno astaamahan isbarbardhiga soo socda
Miiska oo kooban
Qiimaha 799 € 980 €
Habka kuleylka Induction (si dhakhso leh ayuu u kululaadaa) Resistors
Kacdoon daqiiqadii 11.000 10.200
Nadiifinta Garbaha aan dhaqayn saxanka Haa weel dhaqe
Heerkulka 40aad-120aad 37aad-100aad
Awoodda 2 litir 2 litir
Cabbiraadaha X x 360 300 290 mm X x 300 285 285 mm
Foomka wax iibsiga Dukaamada Iyadoo loo marayo soo-jeediyayaal leh banaanbaxyo guriga ka socda
Shirkadda Taurus (Isbaanish) Vorwerk (Jarmalka)
Waa maxay robotka jikada si uu u iibsado?
Waa inaan ku bilowno inaan dhahno runti waa mashiinno isku mid ah, labadaba astaamo iyo shaqooyinkooda iyo qalabkooda, sidaas darteed, haddii aan dooranno mid ama mid kale, waxaan helaynaa aalado wanaagsan oo wax badan naga caawin doona jikada.
Qaabka hadda loo yaqaan 'MyCook' wuxuu aad ugu eg yahay nooca TM21, oo la abuuray ku dhowaad 20 sano ka hor, sidaa darteed wuxuu leeyahay astaamo horey loogu sii hagaajiyay qaabka hadda jira ee Thermomix (TM31): cariiriga saxanka weelka ee salka ku haya taas oo ka dhigaysa shiidiintu mid aad u adag, baaxadda weyn ee mashiinka, nabaro ku yaal daboolka oo dhib ka dhigaya dhaqitaanka iyo maqnaanshaha heer kulka 37º oo waxtar weyn u leh sameynta cajiinka iyo ukunta jilicsan Ugu dambeyntiina, taabashada, tayada walxaha caagga ah ee muraayadda iyo Qalabka Thermomix wuxuu u muuqdaa mid tayo fiican leh ka badan MyCook.
Si kastaba ha noqotee, in kasta oo xaqiiqda ah in MyCook ay ku jirto kuleylka kuleylka iyo 120º ee heerkulka, Thermomix wali waa robot leh sannado badan oo khibrad ah (iyo, haddaba, waxay ku raaxeysaneysaa kalsooni dheeri ah), dhaqitaan sahlan oo ka kooban qeybaheeda, adeegga iibka kadib kaas oo ka dhigaya 200 euro yar oo kala duwanaan ah bixinta iyo waxtarka weyn ee shiidan iyo karinta sababtoo ah naqshadeynta wanaagsan ee muraayadda oo ballaaran salka
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Thermomix
Hadaad ubaahantahay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan mashiinka cuntada Thermomix, Waxaan kugula talinayaa inaad gasho qaybta Waa maxay Thermomix?